एपेक्स ब्वाईज होस्टेल : ‘बिद्यार्थीका लागि घर जस्तै’ - Nepalgunj Business
एपेक्स ब्वाईज होस्टेल : ‘बिद्यार्थीका लागि घर जस्तै’
नेपालगञ्ज – बस्नका लागि कोठा खोज्ने ! तर कहाँ ? शहरमा पढ्न आउने बिद्यार्थीका लागि सबैभन्दा टाउको दुखाईको बिषय यही बन्छ । त्यसरी कोठा खोज्न जहाँ त्यही भौतारिरहनु भएको छ भने त्यस्ता बिद्यार्थीका लागि एपेक्स ब्वाईज होस्टल उपयुक्त गन्त्व्य बन्न सक्छ । गत वर्ष नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र नजिक रहेको उक्त होस्टलले विद्यार्थीलाई पठनपाठन सहित घरायासी वातावरण सहित बस्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा अध्यापनरत युवाहरु शिशिर सापकोटा, मुस्कान कार्कीले उक्त होस्टल सञ्चालनमा ल्याएका थिए । बागेश्वरी हेल्थ कलेजका प्रिन्सिपल छन् भने उनी लगायत कार्कीले बिभिन्न कलेजमा पढाउँछन् । ‘बाहिर पढ्न जाने बिद्यार्थीका लागि कोठा खोज्न निकै सकस हुन्छ । भेटियो भने पनि भने जस्तो हुँदैन ।’ होस्टेलका प्रबन्धक निर्देशक सापकोटा भन्छन्–‘त्यही महसुस गरेर हामीले होस्टेल सञ्चालनमा ल्याएका हौं । बिद्यार्थीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहनुभएको छ ।’
धेरै जग्गा सहितको घरमा होस्टेल सञ्चालनमा छ । एकान्त वातावरणले बिद्यार्थीलाई पढाईमा सहज गराउँछ । होस्टलकै बारीमा तरकारी लगाइएको छ भने कुखुरापालन गरिएको छ । बिद्यार्थीलाई ताजा तरकारी खुवाउने लक्ष्य सहित होस्टेल व्यवस्थापनले यस्तो काम गरेको हो । ‘यहीको उत्पादन प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’– सापकोटाले भने । विद्यार्थीका लागि होस्टेलमा बिभिन्न सुविधाहरु राखिएको छ ।
न्यूनतम महसुलमा बिद्यार्थीले आधुनिक निर्माण सामाग्री तथा फर्निचरको प्रयोग गर्न पाएका छन् । त्यस्तै अलग भान्सा तथा कक्षा कोठा हलको व्यवस्थापन गरिएको वार्डेन मुस्कान काकीले बताए । एक्वागार्डको पानी प्रयोग गरिन्छ भने पावर ब्याकअपका रुपमा इन्भटर जडान गरिएको छ । बिद्यार्थीलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद देखि सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय बनाईन्छ ।
नेपालगञ्जका सबैभन्दा धेरै शिक्षण संस्था भएको ठाउँमा रहेका कारण धेरै बिद्यार्थीका लागि होस्टेल पायक पर्ने कार्कीले बताए । उनले भने,–‘गणेशमानचोक देखि बिपीचोकको आसपास धेरै शिक्षण संस्था छन् । हाम्रो होस्टल गणेशमान चोक नजिकै पर्ने भएका कारण पनि बिद्यार्थीलाई सबै ठाउँमा पायन पर्ने भएको हो ।’ ‘हामीले बिद्यार्थीको स्वास्थ्यमा ध्यान दिदै स्वस्थ्य र शुद्ध घरको जस्तै खाना उपलब्ध गराउँछौ ।’ वार्डेन कार्कीले भने–‘प्रविधि मैत्री बनाउन वाईफाईको व्यवस्था गरेका छौं ।’ होस्टेलका प्रबन्धक निर्देशक सापकोटाले आफ्नो होस्टेलमा बसेका बिद्यार्थीहरुका बारेमा अभिभावकले चिन्ता नै गर्न नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,–‘छोरो बिग्रिएला भन्ने चिन्ताबाट अभिभावक मुक्त भए हुन्छ ।’
बिद्यार्थीको सुरक्षाका लागि २४ सै घण्टा सुरक्षा गार्डको व्यवस्था गरिएको छ । पढाईमा कमजोर बिद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षा र आर्थिक रुपमा कमजोर बिद्यार्थीलाई बिशेषरुपमा हेरिने उक्त होस्टेलले जनाएको छ । सञ्चालक पनि प्राविधिक फिल्डबाटै आएकाले त्यसक्षेत्रको पढाईमा लागे बिद्यार्थीका लागि होस्टेल झनै उपयुक्त रहेको छ । होस्टेलले अहिले नयाँ भर्ना शुरु गरेको छ । गत वर्षभन्दा शुल्क समेत घटाएको बताउँदै सापकोटा भन्छन्,–‘बिद्यार्थीहरुलाई एकपटक होस्टलमा आउन अनुरोध गर्छु ।’ नेपालगञ्जमा सबैभन्दा राम्रो र व्यवस्थित होस्टेलका रुपमा एपेक्स स्थापित छ ।
प्रकाशित मितिः सोमवार, साउन ६, २०७६ 3:36:09 PM